Vatambi veGamma matsi-ekutsvedza ekuwedzera murume nemukadzi kumba TPE kusimba mat dzimba yekudzidzira imwechete mudzidzi matema
Triangular splicing bonde, zviri nani yakachengeteka uye zvakatipoteredza zvine hushamwari EVA zvinhu, iyo mbishi zvinhu zvine furoji pakukwirira tembiricha uye yakamanikidzwa kuita yakakura
Kuteedzera dhizaini yeganda pamusoro peganda revanhu, zvakaenzana zvakarongedzwa nenzira yakarongeka, kuitira kuti pamusoro pemubhedha pasi panotsvedzerera asi isingatsvedza, uye zvakare inoita kuti kubata kwacho kunzwe pedyo neganda revanhu
Izvo zviri nyore kuchenesa uye ichacheneswa mushure mekumwe kupukuta, matsi emvura, makaka makaka, zvasara mupunga zviyo, zvinwiwa, masobho haazotsike, asiri-anonamira, achinyatso kudzora kukura kwebhakitiriya, kuchenesa uye kuchengetedza nguva
Kukwirira kwakanyanya, kusimba kwakanaka, kunogona kutora simba rechisimba zvakanaka, kudzivirira makumbo kubva mukukuvara
Mvura-chiratidzo, anti-skid, kukatyamadza-humbowo uye kudonhedza-humbowo, mubatsiri akanaka wekushandisa pamba, akasiyana akasimba hunyanzvi, kuzadzisa izvo zvakasiyana siyana zvinodiwa zvemhuri
Yoga mat varume nevakadzi vakawedzera kuwedzeredzwa kwakatambanudzwa anotanga kumba asiri-ekutsvedza uye asinganetsi kutamba yeyoga fitness mat
[Chigadzirwa zita]: AP-224 maviri-mavara yoga mat
[Chigadzirwa cheChigadzirwa]: yepepuru magenta, huswa hwakasvibirira, pingi bhuruu yepepuru, yakajeka cyan bhuruu
[Chigadzirwa chigadzirwa]: Kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza TPE
Thicken Yoga Mat EVA Zvishandiso zveVarume neVakadzi Kusimba Mat Ruviri-mativi Akachena Ruvara Akakora Kutamba Mat
Iyo yepasi bonde chigadzirwa inoumbwa neepamusoro-tembiricha inopupa furo, EVA mhando nyowani zvinhu, yakachengeteka uye zvakatipoteredza zvine hushamwari zvinhu, zvisina-chepfu uye zvisinga gumbure hwema, uye inogona kuiswa kune akasiyana maficha, senge: yekurara, yekutandarira, imba yevana, dzimba dzekugara, balcony, yoga nzvimbo, jimu, zvitoro, mapaki enhandaro, kindergartens, nezvimwe.
Yoga mat mat fitness mat Upgrade high-density non-slip mat Sit Sit-up multifunctional sports mat
1. Ukangotora PVC yoga bonde, usaivhure, uye nekunhuhwira pamusoro pemboro nemhino dzako. Kana paine munhuwi unopinza, zvingangoita kuti mhando haina kukwana zvakakwana.
2. Shandisa chigunwe chako uye munwe wemunwe kunamira iyo yoga mat kuti uyedze kumanikidza uye kusimba.
3. Pukuta iyo yoga mat nepukuta kuti uone kana zvinhu zviri nyore kutsemuka kana kana paine maronda kana adhonzwa zvinyoro nyoro.
4. Zvinyoro nyoro kumeso kwemuchira nechanza cheruoko rwako kuti unzwe kuoma.
Yoga bonde rechikadzi rechirume kurovedza muviri rakareba rakawedzeredzwa rakakora risiri-rekutamba dhanzi kusimba kurovedza muviri mat matangi mat mat pamba
Maitiro: 1. Isina-kusvibisa zvinhu, inova inotsvedza inodzivirira kupfuura pvc zvinhu zveiyo yoga mats (tpe zvinhu hazvibate mvura, kunyangwe ukadikitira panguva yekudzidzira, iko kuramba kurira kuchiri kwakanakisa uye hakuzotsvedza).
2.Ine simba rekutsigira uye rekutsigira (iwo mutsindo kubva pakudzvanya kudzoka kudzoka kune yakajairwa fomu, zvinongotora 0.1 masekondi!).
3. Yakachena kuchengetedza kwezvakatipoteredza zvinhu, iyo mbishi zvinhu ndeye tpe isiri-inosvibisa zvinhu, kutanga yashandurwa kuita EVA zvinhu, hakuzove nekuravira kubva mukugadzirwa.
4. Pasi pechimiro cheiyo imwechete flatness, izvo zvinhu zviri nyore, chete 950 gramu, uye inokodzera kuitisa.
5. Ruvara uye chimiro chechigadzirwa zvakanyatsogadzirwa nemugadziri, uye fashoni nehunyanzvi zvinogara pamwe chete.
6. Mitsetse-miviri yakatsemuka-kupatsanura mitsetse, mizinga yehuchi inopesana nekutsvedza kumberi, hove-chiyero anti-slip mitsara kumashure, uye iyo padhi yakazara yakafukidzwa netumapundu tudiki-tudiki.
Thicken yoga bonde Eva zvinhu varume nevakadzi kugwinya bonde Ruviri-mativi solid solid goo mat
Evha raibha uye zvigadzirwa zvepurasitiki zvinhu zvitsva zvine hunyanzvi zvepurasitiki furo zvinhu, izvo zvine zvakanakira zvakanaka zvekutsikirira, kuvhunduka kuramba, kupisa kupisa, kupisa kwemanyoro, kemikari ngura kuramba, nezvimwewo, uye usatore mvura. Evha raibha uye zvigadzirwa zvepurasitiki zvakagadzirirwa kuti zvigadziriswe uye kuumbwa, uye kushamiswa kwavo kusagadzikana kuri nani pane echinyakare furo zvinhu zvakadai se polystyrene (furo), uye vanosangana nezvinodiwa zvekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, zvichivaita sarudzo yezvigadzirwa zvekutengesa kunze. Inofananidzwa nekuvhunduka-chiratidzo kurongedza, inogona kutemwa uye kuumbwa; nekuda kwemusiyano wakakura muhuwandu, inogona zvakare kushandiswa kune akasiyana madanho ezvinangwa.
Yoga Mat EVA Zvishandiso zveVarume neVakadzi Kusimba Mat Ruviri-mativi Akachena Ruvara Rakaonda Dhani Mat
Furo bonde hombe chidimbu chakakora taekwondo bonde dhani studio bonde evaraidzo paki nhabvu karati horo bonde
Tarisa pane zvakadzama-kungokuunzira mhando iri nani
Mavara akajeka uye akajeka mavara
Mativi ese ari maviri anogona kushandiswa, maviri-mativi asiri eslip, akasiyana-siyana emhando inowirirana sarudzo, yakajeka ruvara, yemuchadenga uye yakanaka, wedzera mavara akajeka kunzvimbo yako
Maketi ekusona, anokambaira mati, evana yekurara evacheche ari kukambaira mati, akasimba tsoka tsoka, furo mats
1. Inokurudzirwa kuburitsa pasuru uye kuiisa munzvimbo ine mweya usati waishandisa, woishandisa kana hwema hwapera;
2. Kana uchishandisa, ndapota ungana zvinoenderana nemazino nemeno, iwe unogona kugadzira chero yekusanganisa musanganiswa;
3. Paunenge uchishandisa, usabata bata nhovo nezvinhu zvakapinza kudzivirira kukuvara kumeti;
4. Usarega vacheche vachiruma bonde nemiromo yavo;
5. Usashandise kurohwa kwemafuta pameti, kuti zvirege kuva zvakaoma kubvisa mushure.
Furo rinosimudza jimunasiyamu martial arts kurwa mutsimba Sanda yekudzidzira jimeti yakakwira-kuwanda isiri-inotsvedza dhanzi yemasoja ekudzidzira mat
Isu tinonyatso gadzira yakanaka pasi bonde
Dzivirira mitezo kubva mukukuvara
Yakagadzirwa ne PE zvinhu, kukwirira kwakanyanya, yakanaka cushioning kuita, inogona zvirinani kutora simba remagetsi
Gadzira buffer, sekumbundira kwemunhu mukuru.
Zvinowanikwa Zvigadzirwa, Sitemap, AMP Mobile Floor Furo Rakajeka, Floor Rakajeka, Floor Puzzle Mat Cushion, Yepasi Yekunze Exercise Mat, Floor Furo Rakajeka Mat, Floor Mat Puzzle, Zvese Zvigadzirwa